Taariikhda Baana Cali; Xiddigii kubadda Koleyga Soomaaliya | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Taariikhda Baana Cali; Xiddigii kubadda Koleyga Soomaaliya
Taariikhda Baana Cali; Xiddigii kubadda Koleyga Soomaaliya
Posted by: Mahad Mohamed May 2, 2020
Himilo – Allaha u naxariisto Injineer Baana Cali waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sannadkii 1965-kii, isaga oo waxbarashada aasaasiga ah ku soo qaatay dugsiyada Raage Ugaas iyo Macallin Jaamac inta aanu waxbarashada sarre ee Injineeriyadda ku diyaarin jaamacaddo ku yaala dalalka Talyaaniga iyo Ingiriiska.
Cayaaraha dalka ayuu kasoo muuqday isagoo tartan kubad koley ku metelay kooxda ciidanka degaanka Xamar sannaddii 1985-tii inta uusan degmada Cabdi Casiis sannad kaddib la hanan tartanka kubadda koleyga degmooyinka gobolka Banaadir.
Nasiib ayuu u yeeshay in loo xulo xulka gobolka Banaadir ee kubadda koleyga, hayeeshee gu’gii 1988-dii ayuu u baqoolay dalka Talyaaniga oo fursad waxbarasho uu ka helay, isaga oo burburkii kaddib uga sii dhaqaaqay magaalada London oo uu saldhigtay.
Waayihiisii London wuxuu kororsaday aqoon iyo khibrad kubadda koleyga ah, taasoo horseeday in 15 sanno kadib uu dalka kusoo laabto si uu u buuxiyo daldaloollo uga soo baxay xulkii qaranka kubadda koleyga ku metelay cayaarihii wadamada Islaamka ee Sacuudigu marti geliyay.
Sannadkii 2007-dii, waxaa loo magacaabay Guddoomiye Xigeenka xiriirka kubadda koleyga oo uu hayay labadii sanno ee xigtay, hayeeshe wuxuu markaa kaddib noqday xoghayaha guud ee xiriirka si uu u dhaqaajiyo hawl huriweyto ahayd oo aan sinnaba la’aantii u hirgasheen. Xiriirka cayaaraha fudud ayaase xila ka qaaday kaddib wareysi uu Injineerku bixiyay oo uu dusha uga tuuray xiriirka eedda in xulkeennu ka baaqday cayaarihii kubadda koleyga ee ka qabsoomay Kigali.
Dadaalkiisa marna kama reebin in dalkeenna uu ku metelo masraxyo iyo shirar qaarkood aynu mooganeyn labaatameeyo sanno, waana sababta aanu marnaba uga go’i doonin qalbiyada bahweynta cayaaraha.
Allaha u naxariiste marxuumka ayaa immika ahaa madaxii xiriirka caalamiga ee xiriirka kubadda koleyga dalka, isagoo sidoo kale ahaa madaxii suuq-geynta xiriirka kubadda koleyga bariga iyo bartamaha Afrika ee Zone 5.
Injineer Baana AUN ayaa beryihii danbe magaalada London kula daalaa dhacayay xanuunka safmareenka ah ee COVID 19 oo uu sababsaday, wuxuuna ifka uga tegay 4 carruur ah iyo xaas.
Previous: Paris Saint-Germain oo lagu abaal mariyay hanashada horyaalka Ligue 1
Next: 3 May – Maalinta xurriyadda saxaafadda
Del Piero: Juventus si cad ayay u soo kabaneysaa
Thomas Tuchel: ‘Chelsea waxay wada sheekeysi joogto ah la sameysaa Erling Braut Haaland’
Barcelona oo heshiis kordhin u sameynaysa Ansu Fati